Sawirro: Qoyska boqortooyada UK oo dunida tusay Amiirad cusub oo kusoo biirtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Qoyska boqortooyada UK oo dunida tusay Amiirad cusub oo kusoo biirtay
A warsame 3 May 2015 3 May 2015
Mareeg.com: Qoyska boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa kusoo kordhay gabar cusub, taasoo noqoneysa Amiiradda 4-aad ee UK. Amiiraddan yar ayaa dhalatay (07:34 GMT) ee sabtida.
Dadka reer UK ayaa si muuqaal ah u arkay amiiradda haatan dhalatay, iyadoo ay siddo hooyadeed.
Amiiradda yar waxaa dhashay Duchess of Cambridge, oo sidoo kale loo yaqaano “Catherine”, waana cunugii labaad ee ay dhasho. Aabaha Amiiradda ayaa ah Amiir William.
Amiir William iyo xaaskiisa Catherine ayaa caalamka u soo bandhigay gabadhooda cusub ee sabtida u dhalatay. Waxay xalay soo istaageen iyaga oo xambaarsan gabadhooda banaanka hore ee isbitaalka St Mary’s ee London.
Qoyska oo la geeyey qasriga Kensington Palace ayaa halkaas joogi doona dhowr maalmood, waxeyna dib ugu laaban doonaan guriga ay ku leeyihiin deegaanka Norfolk.
(Aabaha iyo Hooyada Amiiradda cusb) Mareeg Media
Cadaado: Guddiga farsamada oo xareeyey 28 oday dhaqameed (Imisa ayaa maqan?)